साहित्य/विविध – Yess Khabar
२३ माघ २०७५, बुधबार ०३:४१२३ माघ २०७५, बुधबार ०३:४१२३ माघ २०७५, बुधबार ०३:४१ by Yess KhabarNo Comments
यि हुन इतिहासकै क्रूर तानाशाह, जसले मान्छेको रगत नदेखी निदाउदैनथे,
हामीले संसारका निकै क्रूर र तानाशाही शासकहरूबारे पढेका र सुनेका छौं । खास गरी शासक वर्गले आफ्ना इच्छा पूरा गर्न र शक्ति जमाउन अमानवीय तरिकाले राज गर्ने गरेको पाइन्छ । आज हामी यस्तै एउटा शासकबारे जानकारी दिएका छौं ।संसारका थुप्रै सनकी शासकबाट निर्दोष जनताले बेकारमा ज्यान गुमाएका छन् । उनीहरूको रगत पानीसरी बगेको छ । ब्लेड ड्राकुला एक त्यस्तै शासक हुन् ।ब्लेड रोमानियन साम्राज्यका निकै खतरनाक तानाशाही राजा थिए । ओटोमन साम्राज्य तथा टर्की साम्राज्यसँगको युद्धताका उनले निकै ठूलो क्रूरता देखाएका थिए । त्यसबेला उनले हजारौंको संख्यामा महिला तथा बालबालिकाको निकै क्रूतापूर्वक हत्या गरेको इतिहासमा उल्लेख छ । यतिसम्म कि, उनले साना–साना बालबालिकालाई समेत बली चढाएका थिए । ती शासक हेर्दा पनि निकै डरलाग्दा रूपका थिए । उनको रूप हेरेरै मानिसहरू डराउँथे । मानिस तर्सिन उनको नामै काफी थियो ।रोमानियन हिंस
२३ माघ २०७५, बुधबार ०३:२८२३ माघ २०७५, बुधबार ०३:२८२३ माघ २०७५, बुधबार ०३:२८ by Yess KhabarNo Comments
मेघाका श्रीमान मिडियामा, हात काटिएपछि किन छोडे मेघालाई ?
काठमाडौं -बिराटनगर मेघा घिमिरे अहिले उपचारको लागि काठमाण्डौमा आइपुगेकी छन् । उनी करेन्ट लागेर दुबै हाट गुमेपछि थप उपचारको लागि काठमाण्डौ आइपुगेकी हुन् । बिराटनगरमै रहेको घरमा आज भन्दा ३ बर्ष अगाडी मेघालाई करेन्ट लागेको थियो । अहिले भने उनि आफ्नी आमाको साहारामा उपचारको लागि काठमाण्डौ आइपुगेकी हुन् । उनले आफ्नो उपचारको लागि धेरै ठाँउबाट सहयोग आउन थालेको पनि बताएकी छन् । ‘म उपचारको लागि काठमाण्डौ आएकी हु’ उनले भनिन्, ‘अहिले भने सामाजिक सञ्जालबाट मेरो अवस्थाको बारेमा थाहा पाएर धेरैले सहयोग गर्न थालेका छन् ।’श्रीमान बिकास कार्कीले भने करेन्ट लागेर दुबै हात काटिएपछि मेघालाई छोडिदिएका छन् । ‘पहिला धेरै माया गर्थे’ उनले भनिन्, ‘अहिले टाढा भएका छन् ।’ हात जोडिएको अवस्थामा आफ्नो जिविको पार्जनको लागि आँफैले संघर्ष गर्ने उनले बताएकी छन् । हेनुहोस् भिडियो -
२२ माघ २०७५, मंगलवार ०६:२४२२ माघ २०७५, मंगलवार ०६:२४२२ माघ २०७५, मंगलवार ०६:२४ by Yess KhabarNo Comments
थाहा पाउनुस् सुनसँग जोडिएका १३ रोचक कुरा
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार प्रत्येक धातुले हामीमाथि प्रभाव पार्ने गर्दछ किनभने यो सबै सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहको खेल हो ।हरेक धातुको एक विशेष ग्रहसँग सम्बन्ध हुन्छ । यी ग्रहले ती धातुलाई आफू अनुसार प्रभावित गर्ने गर्दछ । तामा, चाँदी, सुन वा महँगा रत्न वा हिराले बनेको आभुषण, यी सबै कुराले कि त हामीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ वा यसले हामीमाथि नकारात्मक असर पनि पुर्याउने गर्दछ ।तर यदि तपाईं सुन लगाएर आफ्नो जीवन सुखमय बनाउन चाहनुहुन्छ भने पंडित प्रफुल्ल भट्ट अनुसार थाहा पाउनुस् सुनका शुभ–अशुभ असर र यसको प्रयोग गर्ने तरिका बारे । खुट्टामा सुन नलगाउनुहोस्ः खुट्टामा सुनको बिच्छी वा पाउजु लगाउनु हुँदैन । सुनलाई खुट्टामा लगाउँदा दाम्पत्य जीवनमा समस्या आउन सक्छ र स्वास्थ्य पनि खराब हुनसक्छ । घरको यो दिशामा राख्नुहोस् सुनः केही मानिसहरु सुन घरमा राख्छन् । त्यसकारण यदि तपाईं सुनलाई दर
२२ माघ २०७५, मंगलवार ०६:१३२२ माघ २०७५, मंगलवार ०६:१३२२ माघ २०७५, मंगलवार ०६:१३ by Yess KhabarNo Comments
विश्वमा जम्मा ५० जना यस्ता रोगि छन् , जुन रोग लागेपछि न त रुन सकिन्छ न त पानी पिउन नै !
काठमाडौं । ब्रिटेनमा एकजना १९ वर्षीय युवतीलाई अनौठो बिरामी लागेको छ । यो बिरामीका कारण उनी सामान्य व्यक्ति जस्तो बाँच्न सकेकी छैनन् ।डेलि मेलमा प्रकाशित समाचार अनुसार, लिण्डसे कुब्ररे नाम गरेकी युवती अरु जस्तो न त रुन सक्छिन्, न पानीमा भिज्न । सुन्दा अनौठा लाग्छ, यी युवतीलाई एक्वाजनिक अर्टकेरिया नाम गरेको बिरामीले सताएको छ । यो बिरामीमा पानीबाट एलर्जी हुने गर्दछ । अहिले यो बिरामीबाट संसारमा ५० जना पीडित भएको पत्रिकामा उल्लेख छ । पानीबाट एलर्जी भएका कारण दूधबाट बनेका पदार्थको मात्रै प्रयाग गर्न सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यही बिरामीका कारण लिण्डसे घरबाहिर पनि निस्किन सक्दिनन् । उनलाई कुनै बेला पानी परेर भिजिएमा के होला भनने चिन्ताले सताउने गर्दछ ।पानीसँग अलिकति सम्पर्क भएपनि उनलाई श्वास फेर्न समस्या हुने गर्दछ । यतिमात्र हाेइन शरीरमा रातो डाबर आउने गर्दछ ।
२२ माघ २०७५, मंगलवार ०५:०२२२ माघ २०७५, मंगलवार ०५:०२२२ माघ २०७५, मंगलवार ०५:०२ by Yess KhabarNo Comments
कृष्ण वलिले खुट्टा हाले, रुपा सँसारकै खुशी ।
काठमाडौं- रुकुमका कृष्ण वलिसँग केहि महिनाअघिसम्म दुख र पिडा बाहेक केहि थिएन । देवी जस्ती श्रीमतीको अटुट साथ र परिवारको माया त थियो तर पैसाको अभावका कारण आफ्नो करेन्ट लागेर गुमेका दुई हात र एक खुट्टा जोडिने सपना सपनामै सिमित थियो । करेन्ट लागेर जसोतसो बाँचेका कृष्णको उपचारमा ७० लाख हाराहारीको खर्च भएको थियो, परिवारलाई ४५ लाख भन्दा माथिको ऋण थियो । छटपटी थियो, निदाउन सक्दैन थिए । त्सैबिच कलाकार तथा भिजे शिशिर भण्डारी उनीहरुको घर पुगे, उनीहरुको दुख र बेदनाले भरिएको भिडियो बनाए । शिशिरको प्रस्तुति शैली र रुपा कृष्णको पिडाले सबैको मन छोयो । भिडियो प्रसारण भएको २ दिनमै ४ लाख सहयोग लिएर शिशिर फेरी कृष्णको घर गए । अब कृष्णो जीवनमा आशाका नयाँ किरणहरु पलाए ।त्यसपछि उनको घरमा मिडियाहरुको ओईरो लाग्न थाल्यो । सयोगीहरु उनकै घरमा आउन थाले । एक एक मिलेर सागर बन्दै गयो, शिशिरको भिडियो हेरेर रुदै फोन गर्
२२ माघ २०७५, मंगलवार ०४:५४२२ माघ २०७५, मंगलवार ०४:५४२२ माघ २०७५, मंगलवार ०४:५४ by Yess KhabarNo Comments
यी हुन् विश्वका ६ अचम्मका ठाउँहरु जहाँ सुर्य कहिल्यै अस्ताउँदैन !
एक दिनमा १२ घण्टा दिउँसो र १२ घन्टा राति हुन्छ भन्ने सामान्य कुरा त हामि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तर विश्वमा केही यस्ता ठाँउहरु पनि छन् जहाँ चौबिसै घण्टा दिउँसो हुन्छ ।सुर्य कहिल्यै नअस्ताउने यस्ता ठाँउलाई ‘द मिडनाइट सन’पनि भनिन्छ । यो एक प्राकृतिक कारणले हुन्छ । उत्तरमा आर्कटिक र दक्षिणमा अन्र्टाटिक वृत्तमा गर्मि महिनामा चौबिसै घण्टा सुर्य देख्न सकिन्छ ।सुर्य नअस्ताउने केही स्थानहरुको सुची निम्न छन् । १. नर्वे उच्च भौगोलिक उचाइको कारण नर्वेमा ग्रिष्म ऋतुमा मध्यरात सम्म पनि सुर्य अस्ताउँदैन । यो देशमा मे महिनाको अन्तिमबाट जुलाईको अन्तिम सम्म करिब ७६ दिन सुर्य २० घन्टा भन्दा बढी उदाउँछ । २. फिनल्याण्ड यो देशको अधिकांश भागहरुमा गर्मी महिनामा सुर्य लगातार ७३ घण्टासम्म उदाँउछ । यहाँ सुर्य अस्ताएर पनि केही समयमै फेरी उदाँउछ जसले रात र उदाँउदो दिनको भिन्नता नै हराइदिन्छ । ३. स्विडेन
२२ माघ २०७५, मंगलवार ०४:३८२२ माघ २०७५, मंगलवार ०४:३८२२ माघ २०७५, मंगलवार ०४:३८ by Yess KhabarNo Comments
कुन महिनामा जन्मेका युवतीहरु कस्ता चरित्रका हुन्छन ? जान्नुहोस्
काठमाडौँ । बिशेषत: महिलाको स्वभाव र सरलपनले आकर्षित गराउने खाल्को हुन्छ । महिलाहरु आफ्नै परिवेश अनुसारको सिको गर्ने पनि गर्दछन तर उनीहरुको स्वभाव जन्मेको महिना अनुसार पनि निर्धारण हुने ज्योतिषीय तथ्य पनि फेला परेको छ कुन महिना जन्मेका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने केहि कुराको बारेमा पत्ता लागेको केहि तथ्यहरु:- बैसाख – यो महिनामा जन्मिएका महिला सामान्यतय सुन्दर आँखा भएकी हुन्छन् । यी महिलाको स्वभाव सरल र सहज हुन्छ । उनीहरूका श्रीमानको स्वभाव पनि राम्रो हुन्छ । यी महिलाहरू कम खर्च गर्ने तर धेरै क्रोध भएका हुन्छन् । उनीहरूको जीवनमा धन र सुख प्रशस्त प्राप्त गर्ने बताइन्छ । जेष्ठ – यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरू तिष्ण बुद्धि भएका हुन्छन् । उनीहरूको जीवनमा सुख र सम्पती सहज तरिकाले प्रप्त गर्छन। यो महिना जन्मेको महिलाहरु सधै सफलता हातपार्छन् । धार्मिक रुपमा बढी आस्था राख्ने गर्दछन् । ज
२२ माघ २०७५, मंगलवार ०४:३१२२ माघ २०७५, मंगलवार ०४:३१२२ माघ २०७५, मंगलवार ०४:३१ by Yess KhabarNo Comments
आज सोनाम ल्होसारको अवसरमा टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै
काठमाडौं । तामाङ समुदायले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाउने सोनाम ल्होसार अर्थात् नयाँ वर्ष पर्व आज (मंगलबार) विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। मञ्जुश्री पात्रोअनुसार आजदेखि कुकुर वर्ष पूरा गरी सुँगुर वर्ष प्रवेश हुन्छ । यो २८५५औँ सोनाम ल्होसार हो। मञ्जुश्री पात्रो सुरु भएको २८५५औँ वर्ष भएकाले सोनाम ल्होसार पनि त्यति नै वर्ष भएको मूल आयोजक समितिले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सोनाम ल्होसार पर्व मनाइन्छ। ल्होसारका १२ वटै वर्ष पशुपक्षीको नामबाट गणना गरिएकाले प्रकृतिपूजक रहेको बताइन्छ । मुसा, गाई, बाघ, बिरालो, गरुड, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी १२ वर्षमा सोनाम ल्होसारलाई विभाजन गरिएको छ ।यस अवसरमा नेपाल तामाङ घेदुङलगायत संस्थाले टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनाइएको छ । सोनाम ल्होसार महोत्सवका नाममा तामाङ खा
२१ माघ २०७५, सोमबार ०८:४३२१ माघ २०७५, सोमबार ०८:४३२१ माघ २०७५, सोमबार ०८:४३ by Yess KhabarNo Comments
जापानकी २१ वर्षे युवती संसारकै सबैभन्दा सुन्दर ट्रक ड्राइभरको रुपमा चर्चित भएकी छिन् ।जापानको कोची प्रान्तमा हुर्किएकी राइनो सासाकीले कहिले पनि ट्रक ड्राइभर बन्ने सोच नभएको बताइन् । तर सात वर्षअघि आफ्ना ट्रक ड्राइभर बुवा एकाएक बिरामी भएपछि उनले बुवाकै पाइला पछ्याउने निर्णय गरिन् । बिरामी भएपनि कामलाई निरन्तरता दिइरहेका बुवालाई घरभन्दा हज्जारौं किलोमिटर टाढा, बाटोमा एक्लै र हेरबिचार गर्ने कोही नभएको देख्दा उनले सहन सकिनन् । त्यतिबेला स्कूलमा ‘डान्स टिचर’ को रुपमा काम गरिरहेकी उनले आफ्नो बुवालाई ट्रकको लामो यात्रामा साथ दिने निर्णय गरिन् । उनले ट्रकको लाइसेन्स पनि पाइन् । ट्रक चलाउन सुरु गरिसकेपछि पनि उनले आफ्नो नृत्य सिकाउने जागिरलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिन् । तर ट्रकमा लामो यात्रामा निस्किएपछि आफ्नो कामका लागि घर फर्कन कहिलेकाँही सम्भव नहुने पनि उनले अनुभव गरिन् । त्यसकारण उनी आफ्न
१७ माघ २०७५, बिहीबार ०४:०३१७ माघ २०७५, बिहीबार ०४:०३१७ माघ २०७५, बिहीबार ०४:०३ by Yess KhabarNo Comments
धुर्मुस सुन्तलीको रँगशाला बनाउन गरिब, दुखीको भगवान बनेका शिशिर भण्डारीले सहयोग रकम दिदै
काठमाडौं- कलाकारिताबाट समाजसेवामा लागेका सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेद्वारा सञ्चालित गैर नाफा मुलक सामाजिक संस्था ‘धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशन’ ले ‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’ निर्माणको घोषणा गरेको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशन र भरतपुर महानगरबीच रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेर हाल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दैआएको चितवको भरतपुर महानगरपालिका १५ मा रहेको जग्गामा रंगशाला निर्माणको घोषणा गरिएको हो । फाउण्डेशनले रंगशालाको लागत तीन खर्ब अनुमान गरेको छ । सितारामका अनुसार, महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने २० बिघा ६ कठ्ठा जग्गामा रंगशाला बन्ने छ । रंगशालामा क्रिकेटसँगै अन्य विधाका खेलहरू पनि खेल्न सकिने गरी निर्माण गरिने बताइएको छ । गुरुयोजना तयार भएको २ वर्षभित्